Microfiber Leather Factory, Vatengi - China Microfiber Leather Vagadziri
Dhizaini Saizi Microfiber Yakagadzirwa Leather yeMota
Iro zita rizere re microfiber yeganda ndeye microfiber-yakasimbiswa PU yeganda, iyo yakaputirwa nePU kupfeka pahwaro hwehwaro hwaro hwakagadzirwa nemicrofiber.
Yakakwira Peel Simba Simba Rinofurika Mota Microfiber PU Leather
Izita rakazara re microfiber yeganda "microfiber yakasimbiswa dehwe". Icho chiri cheganda richangobva kugadzirwa mumatehwe ekugadzira. Izvo ndezverudzi rutsva rweganda.
Multi Ruvara uye Yakanaka Abrasion Inodzivirira Microfiber Leather
Izita rakazara re microfiber yeganda "microfiber yakasimbiswa dehwe". Icho chiri cheganda richangobva kugadzirwa mumatehwe ekugadzira. Izvo ndezverudzi rutsva rweganda. Ine abrasion kuramba, kutonhora kuramba, kufema, kukwegura kuramba, uye zvakapfava magadzirirwo. , Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza uye kutaridzika kwakanaka, ndiyo sarudzo yakanakisa kutsiva ganda rechisikigo (yekutanga danga remombe), ikozvino mabhizinesi mazhinji achatengesa microfiber dehwe seyekutanga mombe yemombe pamitengo yakakwira.
Eco-inoshamwaridza YeMotokari Microfiber Leather yeCar Material
Bensen's microfiber yeganda ine yakanyanya abrasion kuramba, nyaradzo uye tensile simba. Sezvo Bensen iine fekitori yayo, inokwanisa kupa yakakwikwidza mitengo uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Chinese Fekitori Yakananga Kutengesa Mota Microfiber Cream Leather
Microfiber chakaita zvokugadzirwa nedehwe iri zvishandiswezve nedehwe, vanonzwa akapfava kupfuura chaiko nedehwe, ndezvaiye chakaita zvokugadzirwa nedehwe mune itsva kukura chepamusoro-mugiredhi reganda, iri mhando nyowani yeganda.
Yakakwira Hunhu Green Green Microfiber Leather yeMotokari
Yakakwira mhando microfiber yeganda ine kunetseka kupfeka kuramba, kufema, kukwegura kuramba, kupfava uye kugadzikana, uye kusimba kuchinjika.
Kupa Yakakwira Hunhu PU Chakagadzirwa Microfiber Leather yeMota
Mune PU polyurethane yakawedzera microfiber, saka iyi nhumbi yeganda ine yakanakisa kupfeka kuramba, mune imwe nhanho kuwedzera kushandiswa kweganda nguva, uye mukufema uye kuchinjika kwakanyanya kunaka, bata kupfuura ganda rechisikigo.